China Wholesale nhabvu nhabvu pinnies mitambo vest timu kudzidzisa vakuru nhabvu nhabvu basketball timu kudzidzisa Vests Kudzidzisa vagadziri uye vanotengesa | RE-HUO
Wholesale yakachipa nhabvu nhabvu mitambo mitambo vest timu kudzidzisa vakuru nhabvu nhabvu basketball timu kudzidzisa Vests Kudzidzisa
Kugadzirira kukwikwidza:Shandisa aya akasiyana mavara enhabvu mavheti emitambo yetimu. Iwe unogona kunyatso kujekesa vatambi vechikwata uye vanopikisa pasango.
Kugadzikana dhizaini:Yakagadzirwa nepolyester, yega yega nhabvu pini inochinjika muchina, isina kuremerwa uye iine mativi akavhurika emhepo yekufema. Iko kusununguka kupfeka, kukuchengetedza iwe kutonhorera panguva yemakwikwi anotyisa.
Dhizaini dhizaini: Haina chinhu - saka unogona kuzviitira.
Yakagadzirwa ne100% polyester mesh ine maviri-chidimbu elastic bhandi. Zviri nyore kupfeka uye kubvisa.
Yakakwana Yemitambo Senge Basketball, Nhabvu, Nhabvu, Volleyball Uye Zvimwe. Yakanakira ZveChikoro Chikoro Zvekuita Uye Chikwata Mabasa.
Chigadzirwa Chigadzirwa: Scrimmage yekudzidzira vesti
Zvinhu: 105gsm 100% polyester
Zvigadzirwa: OEM sevhisi
Feature: Inofema, Inokurumidza kuoma, Plus saizi, Anti-pilling, Eco-inoshamwaridzika
Ruvara: Dzvuku / orenji / Chiedza bhuruu / Fluorescence girini / Yero
Saizi: S / M / L / XL
Mune stock kudzidzisa vest.
Yezvestock yekudzidzira vesti, MOQ yedu zvidimbu makumi mashanu, uye iwe unogona kusarudza akawanda masize uye mavara.
Kana izvo zvataurwa pamusoro zvisina ruvara rwaunoda, isu zvakare takagadzira machira masevhisi, isu tinogona kugadzirisa machira zvinoenderana nezvaunoda, iwe unongoda chete kupa iyo Pantone ruvara rwejira kana kutumira chidimbu chemucheka kufekitori yedu.
Iyi ndiyo saizi chati yatinotengesa, Isu tinopa yakagadziriswa saizi sevhisi.
Unogona kusarudza imwe kana dzimwe nzira dzekudhinda kuti vesti yako yekudzidzira ive yemafashoni.
Iwe unotumira dhizaini yako kwatiri uye isu tichaiprinta zvinoenderana nechikumbiro chako, Kana iwe usingazive maitiro ekugadzira vheti dhizaini dhizaini, unogona kutitumira logo yako kana zano, uye mugadziri wedu anogona kupedzisa dhizaini yako.
Isu tinopa yakatarwa chitaridzi uye tag basa, tichigadzira yekudzidzira vesti neyako brand.
Pashure: Wholesale inokurumidza yakaoma polyester shati yemarathon kushambadzira uye musarudzo mushandirapamwe sublimation t-shirt
Zvadaro: Vakwegura - Vechidiki Scrimmage Dzidzira Majezi Chikwata Pinnies Nhabvu Vest Nhabvu, Nhabvu, Basketball mabhibhi